Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Oday-dhaqameedada gobolka Ohio iyo Hogaanka Arimaha Bulshada oo arima badan lagu gorfeeyay
Shirkii Oday-dhaqameedada gobolka Ohio iyo Hogaanka Arimaha Bulshada oo arima badan lagu gorfeeyay
Waxaa maanta ka dhacay magaalada Columbus, Ohio ee carigaas Mareykanka kulan balaadhan oo dhex maray oday-dhaqameedka jaaliyadda S.Ogadeniya ee Ohio degen iyo Xubno ka socday Jabhadda wadaniga Ogadenya oo uu horkacayay Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee ONLF, Mudane Mohamed Abdi Yasin(Diirane). Waxaa wehliyay wafdiga JWXO ka socday gudoomiyaha Kormeerka iyo Xidhiidha JWXO ee North America, mudane MaxamedRashiid Abdullahi.
Kulanka ayaa waxaa furay Mudane MaxamedRashiid, isagoo si qoto dheer uga hadlay xidhiidhka had iyo jeer ka dhaxeeyo oday-dhaqameedka iyo JWXO sida uu muhiimka u yahay. Wuxuu kaloo ka sheekeeyay sida JWXO iyo cuqaasha deegaanku ay u yihiin ul iyo diirkeed, inkastoo gumaysiga uu adeegsaday siduu u kala gayn lahaa taba kala duwan iyo cadaadin xoogan oo odayaasha uu saaray.
Soo dhaweyntii iyo warbixintii mudane M.rashiid ka dib, waxaa lagu soo dhaweeyay oo hadal dheer isagana ka jeediyay goobta Mudane Diirane. Gudoomiyaha HAAB mudane Diirane wuxuu sii tixraacay qodobadii uu ka hadlay Mudane Maxamed Rashiid. Waxuu kaloo gudoomiyaha faahfaahin dheeri ah ka bixiyay wada shaqeynta wacan ee ka dhaxeeyso odayaasha iyo Jabhadoodu siday kor ugu sii kaceysay mudooyinkii lasoo dhaafay.
Waxaa kaloo halkaas ka hadlay odayaal faro badan oo ay kamid ahaayeen Maxamed Nuur iyo Ibraahim Guhaad. Odayaashu waxey ka caddeeyeen goobta in ay had iyo goor hiil iyo hooba la garab taagan yahiin Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenia.
Mid kamid ah odayaasha ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa “Waanu garab taaganahay ONLF habeen iyo maalin waayo ONLF waxey u shaqeysaa shacabkeenna, waxeyna dooneysaa iney gumeysiga ina saaran ka xoreyso wadankeena”.
Iskusoo wada duuboo, waxey odayaasha reer Ohio kulankan ka cadeeyeen iney guushii gobanimadu muuqato Ogadeyana ay mar dhow xoroobeyso.